Ziyawohloka izikhungo zezemidlalo e-Tshwane | Scrolla Izindaba
Ziyawohloka izikhungo zezemidlalo e-Tshwane
Izikhungo zezemidlalo e-Tshwane ziyawa – futhi iDolobha libukeka lingazinakekeli.
Isibonelo sokunganakwa kwezinto yi-Ekangala Stadium, empumalanga yePitoli. Sekuyiminyaka ecishe ibe mithathu selokhu kwaqhamuka imimoya enamandla iphephula uphahla, futhi manje le nkundla isiyindawo esetshenziswa yintsha yaselokishini yokubhemela zidakamizwa.
Ukulimaza kwesiphepho kubonakala sengathi kudalwe ukunganakekeleki kahle futhi ukulungiswa kwale ndawo kulinganiselwa emalini engaphezulu kwezigidi eziyi-R12 ngokusho kwe-CSIR. Le nkundla seyivaliwe emphakathini ngenxa yezinkinga zokuphepha.
Kusetshenziswe izigidi ku-H.M Pitje Stadium e-Mamelodi ngaphambi kweNdebe Yomhlaba Yebhola Likanobhutshuzwayo yowezi-2010, kodwa ishiywe yiDolobha.
“Lesi sikhungo sathuthukiswa yiSifundazwe sase-Gauteng njengendawo okuqeqeshwa kuyo kodwa satholakala singesihle kahle futhi singaphephile,” kusho okhulumela uMkhandlu wase-Tshwane, uSelby Bokaba ovumile ngenkathi ephendula abakwa-Scrolla.Africa.
UBokaba uthe izingxoxo nesiFundazwe zenzeka eminyakeni eminingana maqondana nentuthuko entsha efaka nendawo eyenzelwe ukusetshenziswa kwezemidlalo ngezinhloso eziningi.
“Kubhekwe izindlela ezahlukene zokuxhaswa ngezimali ngaphandle kwempumelelo,” uyasho.
“Sikhuluma nesifundazwe sase-Gauteng futhi kubhekwa nezindlela zokuxhaswa ngezimali ngaphakathi.”
UBokaba uthe izimali ziceliwe ukuthi zenze uphenyo nokuhlela ukuthi kwenzeke yini enkundleni yezemidlalo Ekangala kodwa izimali ezabelwe ukwakha nokulungisa kabusha ngonyaka wezi-2022 nowezi-2023 zilinde ukugunyazwa,” kusho uBokaba.
● Khonamanjalo, inkundla yezemidlalo i-Chatsworth eThekwini, eyayikade isetshenziswa yi-Manning Rangers ne-Lamontville Golden Arrows nayo ishiywe okungenani iminyaka emine.